Coronavirus: Muxuu yahay Coronavirus? - BBC News Somali
Waan cusbooneysiinay shuruucdeena la xiriirta xogta gaarka ah iyo Cookies-ka
Waxaa isbedel muhiim ah ku sameynay Shuruucda Xogta gaarka ah iyo qoraallada kooban waxaana dooneynaa in aad ogaato waxa ay arrinta kaaga dhigan tahay adiga iyo xogtaada.
Ogow waxa isbedelay
Aan isla ogaano in aad ogoshahay xog uruurinta AMP
Anaga iyo baraha aan ogolnahay nahay waxaan adeegsanaa teknolijiyad sida cookies, waxaana uruurinaa xogta booqashada bogga si aan khibradda ugu fiican ee adeegsiga intarnet-ka aan kuu siino, si aan kugu soo gudbiyo warar iyo xayeysiinno adiga gaar kuu ah. Fadlan aan ogaano haddii aad aqbashay.
Ogolow xog uruurinta horeyna u soco
Maareynta qeybta ogolaanshaha ee bogagga AMP
Qeybahan waxay quseeyaan bogagga AMP oo keli ah. Markale waa lagu weydiin karaa in aad wax ka bedesho, marka aad booqato bogagga BBC ee aan AMP ahayn.
Bogagga fudud ee Mobile-ka ee aad booqatay waxaa lagu dhisay isticmaalka tiknolojiyadda Google AMP.
Wuxuu ku kooban yahay oo keli ah xogta aan laga maarmin.
Si ay bogaggeena web-ka u shaqeeyaa, waxaan xog kooban ku keydineynaa qalabkaaga, adigoo aan ogolaan.
Akhriso xog dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka muhiimka ah ee aan qalabkaaga ku keydineyno si aan uga shaqeysiiyo bogaggeena.
Waxaan isticmaaleynaa keydin gudaha ah si aan ogolaanshahaaga ugu keydino qalabkaaga gudihiisa.
Xog uruurinta ikhtiyaariga ah
Marka aad ogolaato xog uruurinta bogagga AMP waxaad ogolaaneysaa oo aad inoo fasexeysaa in aad ku tusno xayeysiin xiriir kula leh, marka aad ku sugan tahay meel ka baxsan UK.
Akhriso xogta dheeraadka ah ee ku saabsan xayeysiinta xiriirka kula leh ee BBC iyo kuwa nagala shaqeeya xayeysiiska.
Waad dooran kartaa in aanan lagu soo gaarsiin xayeysiin xiriirka kula leh adigoo gujinaya "Diid xog uruurinta siina soco" ee hoose. Fadlan ogow weli waad arkeysaa xayeysiis, balse ma noqoneyso mid kula xiriirta.
Waad bedeli kartaa qeybahan adigoo gujinaya "dookha xayeysiin / Ha iibin xogteyda" ee kuu soo muuqaneysa, markasta.
Diid xog uruurinta horeyna u soco
Coronavirus: Muxuu yahay Coronavirus?
6 Maarso 2020
Xanuunka coronavirus wuxuu soo ifbaxay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay, xilligaasoo aad u dhow, laakiin durba dunida oo dhan ayuu ku faafay Fayraskan oo sababa cudurkan loo bixiyay Covid-19.
Cudurkan waa mid aan awood aad u weyn lahayn, haddana sidaasoo ay tahay dadka qaar ayaa u dhimanaya.
Dhowr bilood gudahood ayuu Coronavirus ku gaaray dhammaan qaaradaha adduunka,
Xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay haatan si weyn dunida looga dareemayo ayaa seynisyahannada caalamka waxay sheegeen in ay adag tahay in wakhti dhaw la sameeyo daawo looga reysan karo, balse waxay khubaradaha ku taliyeen in daweynta ay marwalba ka wanaagsan tahay kahortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaas.
Shiinaha ayaa isbitaallo deg deg ah dhisay isla markii uu cudurkan dillaacayba
Sidee uga hortagi kartaa xanuunka Corona?
Dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkan, waxaana la sheegay in xanuunka u aad usoo rita dadka da'da ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sonkorta, neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. Dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka Corona.
Haseyeeshee arrinta ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunka, haddii uu sameeyo tallaabooyinka hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhakhaatiirta, seynisyahanada iyo hey'adda caafimmaadka adduunka ee WHO.
Marwalba oo gacmaha la dhaqo
Gacmaha oo marwalba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawineysa in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama caabuqa laga qaado xanuunka Corona.
Sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha marwalba la mariyo oo lagu dhaqo aalkolada jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado.
In gacmaha lagu dhaqo saabuun, biyo iyo aalkoladaas waxay ka hortageysaa ama ay dileysaa cabuqa ama jeermiska gacmahaaga ku dahaaran.
Ka fogow dadka
Maadaama dadka qaba xanuunka Corona ay aad u qufacaan, waxaa muhiim ah in qofwalba oo qufacaya ama hindishoonaya aad ka fogaato hal mitir.
Arrintan ayay hey'adda caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindishooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan duulduul ah, kuwaas oo laga yaabo inay sitaan xanuunka.
Ha taabanin sanka, afka iyo indhaha?
Maxay tahay sababta? Haddii aad gacmaha ku taabato meel kamid ah jirkaaga, waxaa dhici karta inay sidaan xanuunka. Marwalba oo ad dooneyso in aad jirkaaga taabato waxaa muhiim ah inaad gacmaha dhaqato.
Gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan sanka, indhaha iyo afka, waxayna taas keeni kartaa in caabuqa uu gudaha u galo jirkaaga, taas oo keeni karta in aad xanuunsanto ama uu kugu dhaco xanuunka.
Ilaalinta nadaafadda neef mareenka jirkaaga
Marwlaba waxaad hubisaa in adiga iyo dadka ka ag dhaw ay si sax ah u raacaan hannaanka saxda ah ee lagu xaqiijiyo nadaafadda neef mareenada.
Waxaa muhiim ah in qofka uu daboolo afka iyo sanka. Marwaba oo aad hindishotana waxaad ku dedaashaa in ad isticmaasho marin ama xaanshi nadiif ah, dibna ha u isticmaalin maradii ama xaanshidii aad hore u isticmashay.
Tani waxay adiga iyo dadka kale ee kugu ag hareereysan idiin ka caawineysaa in uusan xanuunka faafin oo aan la qaadsiinin dadka kale.
Sidoo kale haddii aad dareento in naqaska uu kugu dhagayo oo aad qufaceyso, xilli hore u tag dhakhaatiirta, si xaaladaadda loo ogado.
Coronavirus wuxuu ilaa hadda ku dhacay dad 200,000 oo qof.
Waxaa inta la xaqiijiyay u geeriyooday 7529 qof.
159 waddan ayuu gaaray Cudurkan.
Dood ka dhalatay unugyada bani'aadamka oo daanyeer lagu beeray
16 Abriil 2021